Covid-19: Sharuuc cusub iyo xuduudeyn- ka bilaabata 4ta ilaa 18ka Meey 2020
4ta ilaa 18ka meey waxaa hirgali doono sharciga cusub ee soo baxay 26ki Abriil 2020 kasoo wax ka baali doono xaalado badan xalada Covid-19 darted
Kala fogaansha labada qof weli qasab miyaa?
Haa, waa qasab in aad kala sikataan ugu yaraan 1 mitir qofkakugu dhaw, waxana laguugula talinaya in aad xirato maskeraha afka iyo galoofiska gacmaha. Waa qasab in aad xirata maskeraha markaad tageyso melaha xiran iyo xarumaha babliga ah sida Baska ama tareenada iyo dhamaan gaadiidka dad weynaha.
Mala ogolyahay in la socdo ama la baxo?
Waxaa la ogolyahay in aad u baxdo sabab , caafimaad, shaqo, xaalad deg deg ah, hadana waxa lagu daray in aad booqan karto qofka kugu qaaliga ah, wana qasab in aad ilaalisaa kala fogaanshaha ugu yaraan 1 mitir buulsho badana eeysan meel iskugu imaan karin. Lama ogolo in aad u safarto gobol kale hadii aadan heysan sabab shaqo ama mid caafimaad ama mid xaalad deg deg ah wana laguu ogolyahay in aad kusoo labato hooygada.
Waxa lagugula talinaya in aad wacdo nambarka mamulka gobolka ee xalada Covid-19 si aad u hesho warbixinta gobolkaga ama aad ula socodsiiso hadii aad ku jirtay karantiil iskaa ah ama mid lagugu qasbayba.
Waa kuwee warqadaha cusub ee la iska rabo?
Midkan laga rabo marka gudaha wadanka joogtid(Modulo autocertificazione spostamenti del Viminale)
Midka laga rabo marka aad Talyaniga soo galeyso(Modulo autocertificazione ingresso in Italia
Ma aadi karaa Xadiiqada?
Wala ogolyahay lakiin wa qasab in aad ilaalisa cabirka idiin dhaxeeyo adiga iyo qofka kale ugu yaraan 1 mitir, sido kale mesha caruurta eey ku cayaran wa xirantahay, Maamulka magalo walbo wuxu go’an ka gaari kara xaladiisa goonida ah hadii uu arko in anan la tixgalin shruucdana wuu xiri karaa.
Ma sameen karaa Isboortiga? Masoo wareejin kara ilmaha?
Caruurta wala wadi kara iyo qofki anan isku filneen ee cawinaad u bahan, Isboortiga ha lakiin waa in aad tix galisa ugu yaraan farqi 2 mitir ah wixi kasoo harana waa 1 mitir.
Mala ogolyahay in laga qeyb galo duugta ama xaflado diimeedka?
Xaflado diimeedka maya, Duugta dadka dhintay ha wala ogolyahay lakiin waxa loo ogolyahay kaliya ehelkiisa dadka ugu dhaw ugu badnanan 15 qof, wana qasab in eey xirtaan maskero ilaaliyana farqiga ugu yaraan 1 mitir.
Ma aadi kara maqaaxi ama cunto fudud?
Haa lakiin kaliya waka soo qadan karta ee meesha kuma isticmali kartid, maqayadaha waxeey u furan yihiin kaliya in ey dadka guryahooda ugu geeyaan.lagumana isticmaali karo gudaha maqaaxiga ama goob eey bulsho badan iskugu imanayaan.
Maxaan sameeyaa hadeey qandho i heyso?
Qofki eey heyso qandho dhafsan 37.5 ama eey dhibto neefta waa qasab in uu gurigiisa joogo ogeeysiiyana dhaqtarkiisa si deg deg ah.
Ma heli kara warqada dhaqtarka ama dawooyinka email ahaan ama maseej telefoonka ah?
Haa ,Sharciga del 19 Maarso 2020 dhaqtarka waxa uuku siinaya nambarka warqada umana baahnid in aad soo qadato warqada , farmashiyaha marka tagto oo aad siiso nambarka iyo koodishe fiskalahaga wuxu kugu sin kra dawadada dhib la’aan.
Shuruucdaan adag ee lasoo saray ma xirayana xarumaha caawiyo haweenka dulman?
Maya, Haweenka dulman ama la fara xumeeyo ama la jir dilo ama shaqada lagu dhibateeyo waxeey xaq u leeyihiin in la garab taagnaado waxaad wici karta si bilaash ah nambarka 1522 24 saac habeen iyo maalin. Teeda kale waxa xaq u ledahay in aad aado xarunta saacido wana qeyb ka mid ah sharciyada ogol in aad banaanka u baxdo. Sida ku cad sharcga 11ka marso soo baxay.
Ma jiraan xarumo ka caawiyo daka cilmu nafsiga ka dhasho streska xaladaan Covid-19
Ka bilabato 27ka April waxa furan nambarka bilaashka ah ee 800.833.833, kasoo eey furtay wasarada caafimaadka iyo gargaarka bulshada , waxaad kasoo wici karta hadi aad dalka ka maqantahay 02.20228733waxana soo wici karta maalin walba 8 ilaa 24habeenimo. Waxana lagaga caawinaya si degan.
Si aad u hesho aqbaar intaas dheer booqo boga Numero verde di supporto psicologico kaso eey wasarada caafimaadka ku diyarisay.
OGOLAANSHAHA BANAANKAAD UGU BIXI KARTO KORONAFIIRUS